Ruga settlement: Ndi Gọvanọ ọwụwa anyanwụ anabataghị ya
posted on Jun. 28, 2019 at 7:29 am June 28, 2019
Gọọmentị etiti ekwuola n’ụbọchị Tuzde na a ga-arụ ebe obibi nke a kpọrọ ‘Ruga settlement’ ka enwe ike ikwụsị nsogbu ndi na-achị ehi na-ebute n’obodo. A kọwara na Buhari ebinyela aka ya n’akwụkwọ iwu nke kwuru na a ga-arụ ebe obibi maka ndi na-achị ehi na steeti iri na abụọ ka ndi na-achị ehi nwee ike ịnọ n’ebe ndi a na-azụ ehi ha.
Onye ode akwụkwọ nke ‘Federal Ministry of Agriculture and Rural Development bụ Mohammed Umar kwuru n’ụbọchị Tuzde n’Abuja na ‘Ruga settlement’ ga-akpọta ndi ahịa si obodo ọzọ na Naijiria. N’ịkọwa otu Ruga Settlement ga-esi arụ ọrụ, ihe ndi a ka Umar kwuru:
‘Ruga settlement bụ otu n’ime ihe di mkpa nakwa ihe kacha mma imere Naijiria na obodo ndi ọzọ n’Afrika. Ọ bụkwa ụzọ a ga-esi kwụsị nsogbu nchekwa. A ga-emepụtara ndi na-achị ehi ebe obibi; ebe a ga-enye ha mmiri, ahịahịa, ụlọakwụkwọ nke ụmụ ha nakwa nchekwa. Anyị ga-arụpụta ahịa ehi, ebe a ga na-egbu ehi ma na-erekwa ya. anyị ga-ebido na steeti iri na abụọ. A ga-enwe ebe isii na steeti ọ bụla’.
Mana Ortom bụ Gọvanọ Benue Steeti ekwuola na ala adịghị na Benue ebe a ga-arụ ebe obibi a. O kwuru na gọọmenti etiti na-enupu isi n’ihe gbasara ‘Ranching Law’ nke Benue Steeti nakwa akparị ndi Benue.
Ọzọ, Gọvanọ Imo Steeti bụ Emeka Ihedioha ekwuola na ha esoghi n’ụdị atụmatụ a. O kwuru na ha agaghị anabata nke a ebe ọ bụ na steeti ndi nọ n’ugwu emebeghi nke a.
Ifeanyi Ugwuanyi bụ Gọvanọ ekwuola na agaghi enwe ala maka Ruga settlement. O kwuru na ọkwụ bụ ihe ‘South-East Governors’ Forum’ kwuru.
N’ụzọ di otu a, Darius Ishaku bụ gọvanọ Taraba Steeti kwuru na steeti ya agaghị anabata nke a.
N’ agbanyeghi okwu ndi a ndi gọvanọ kwuru, Buhari kwuru na a ga-emepụta ebe obibi a ka enwe ike kwụsị ogbugbu mmadu nke sitere na nsogbu ndi na-achị ehi nakwa ndi ọrụ ugbo n’obodo a. Ya mere, ọ gwara ndi gọvanọ ndi a ka ha nyere ya aka iweta udo n’obodo a.
Tags:AfricaFULANI HERDSMENHerdsmenIgbo NewsNigeriaPolitics
Onuorah Jennifer June 28, 2019
Asambodo onyeisi ala bụ adigboroja
Ụlọ ikpe enyela iwu ka anwụchie onyeisi Innosson